bsd - Synonyms of bsd | Antonyms of bsd | Definition of bsd | Example of bsd | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for bsd
Top 30 analogous words or synonyms for bsd
UNIX Misy karazany maro ny "UNIX" ka anisan'ny malaza ny BSD, Solaris, Mac OS X, ary ny Linux. Misy ny entam-barotra ary misy koa ny azo ampiasaina maimaimpoana. Ny sary dia mampiseho ny karazany azo ampiasaina amin'izao fotoana izao ka misy sokajy maromaro eo ny sokajy BSD, sokajy System III&V), ary ny sokajy GNU project.
Ps (Unix) Tena rafitra homarinana avy amin'ny BSD tsy manaiky ny safidy ny fitsipika SUS sy POSIX noho ny ady manan-tantara ho an'ny antony (ohatra, ny safidy "e" na ny "-y" dia maneho ny tontolo iainana variables).
UNIX Ny oniversite koa dia nanana milina fikajiana lehibe ka afaka nanamboatra sy nanitatra ilay rindrankajy. Anisan'izany i MIT sy UC Berkeley izay samy manana ny marika "UNIX"-ny avy fantatra hoe Multics sy ny BSD (Berkeley Software Distribution).
Ksh Ny "mksh" (ny MirOS BSD Korn Akora) dia dikan-ksh fa dia mavitrika mandroso, miaraka amin'ny fahazoan-dalana BSD. Dia mivantana taranak'i ny "/bin/ksh" ny OpenBSD sy ny mpandimby azy dia ny pdksh. Ny fampandrosoana ny "mksh" mifantoka amin'ny portability ny fehezan-dalàna, ny fiarovana ny fanamboarana, ny fanohanana UTF-8, ary miezaka misoroka ny tsy misy ilàna azy endri-javatra fanampiny. Izany dia ampy ho an'ny maro ny Unix-like rafitra miasa ary ny toerana misy anao akora MirBSD, FreeWRT , ary MidnightBSD.
Arch Linux Ny fonosana mpitantana ny Andohalambo Linux dia natao hiasa amin'ny fonosana mimari-droa, ary ny tsy manohana architectures i686 sy x86-64. Koa, misy ny rafitra toy ny seranan-tsambo ny BSD antsoina hoe ABS (Andohalambo Hanorina ny Rafitra, Hanorina Rafitra Andohalambo).
WikiNi WikiNi dia rindrankajy malalaka wiki anankiray fehezin'ny lisansy BSD manome fomba tsotra, mahomby sy haingana ahafahana mamorona sy mitantana sehatra iray amin'ny tranonkala na amina tranonkala anatina orinasa iray. Maimaim-poana izy sady azo ovaina sy zaraina arak'io lisansy mifehy azy io ihany koa.
Arch Linux Fomba nentim-paharazana, ny Andohalambo Linux mampiasa ny fanombohana ny rafitra aingam-panahy avy amin'ny rafitra BSD, izay tsy malefaka, fa tsotra. Mamela ny fampiasana ny runlevel (ao amin'ny fomba Rafitra V), sy ny rakitra inittab, fa nisy fahasamihafana kely eo runlevel: vondrona manomboka fotsiny ampiasaina mba hilazana ny foibe rakitra fikirakirana, ny /etc/rc.conf, ao kosa ny famolavolana ny Rafitra, V, izay miasa amin'ny alalan'ny an'ohatra ny rohy ao anatiny ny laha-tahiry, samy mifanaraka amin'ny runlevel. Izany ihany koa ny mamela ny startup ny vondrona amin'ny mirazotra, fa tsy serially.
PostgreSQL PostgreSQL mihazakazaka amin'ny lehibe rehetra rafitra miasa, ao anatin'izany ny Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI, IRIX, MAC OS X, Solaris, Tru64) sy ny Windows. Izany dia mifanaraka amin'ny ASIDRA, ary izany dia ahitana indrindra SQL92 sy SQL99 angon-drakitra-karazany, anisan'izany ny INTEGER, ny ISA, BOLEANINA, CHAR, VARCHAR, DATY, ny elanelam-potoana io, ary TIMESTAMP. Izany koa dia manohana ny fitehirizana ny mimari-droa lehibe zavatra (mimari-droa), toy ny sary, ny feo na lahatsary. Izany ihany koa dia manolotra ny fandaharana ny tontolo iainana ho an'ny fandaharana fiteny C, C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, ary ny fanohanana ny sehatra .NET sy ny fitsipika ODBC, ary ahitana ary tsara mpampiasa boky.
Arch Linux Ny Hanorina ny Rafitra Arch (ABS Andohalambo Hanorina ny Rafitra), dia rafitra iray ho an'ny famoronana ny entana, aingam-panahy avy amin'ny seranan-tsambo ny BSD, izany no manangona ny mari-tomboky ny antontan-taratasy ho tanterahina ny antontan-taratasy, izay avy eo dia nametraka ny pacman. Ny ABS dia manome ny lisitry ny fandaharana akora antsoina hoe PKGBUILD, izay mamela na inona na inona ofisialy package Andohalambo ho namboarina ary mba ho voatokana. Koa, ny ABS mamela ny re-manangona ny rafitra manontolo amin'ny alalan'ny fampiasana niova masontsivana. Ny fitaovana makepkg dia afaka ny ho ampiasaina mba hamoronana fomba amam-panao fonosana .pkg.tar.bz amin'ny alalan'ny fehezan-dalàna ny ampahatelon'ny olona. Ny vita fonosana mety ho nametraka sy havaozina ny pacman, toy ofisialy ny fonosana.